အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသည့် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် မိတ်ဖက် - Yangon Media Group
အမျိုးသား လွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသည့် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကြမ်းကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့် မိတ်ဖက်
အမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေ သော ငြိမ်းစုစီဥပဒေကြမ်းသည် ပြည်သူတို့၏ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်သည်ဟု ထင်မြင်ယူဆခြင်း ကြောင့် ပြင်းထန်စွာကန့်ကွက် ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးနှင့်မိတ်ဖက်ပါတီ ၂၁ ပါတီတို့က ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅ ရက်၊ ရန်ကုန်မြို့ သံလွင်လမ်းရှိပြည်ထောင်စြု့ကံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်၌ပြုလုပ်သော နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ တွေ့ဆုံပွဲတွင် ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေပြင်ဆင်ချက်အား ပြင်းထန်စွာ ကန့်ကွက်ကြောင်း နိုင်ငံရေးပါတီ ၂၁ ပါတီက ပူးတွဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားတိုင်း လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောရေးသားစည်းရုံးပိုင်ခွင့် အခြေအနေဖန်တီးနိုင်မှုကို လျော့ကျသွားရန်အတွက် ယင်းဥပဒေအား လိုအပ်သလို ထိန်းချုပ် ပြင်ဆင်ရန် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ရှုမြင်ကြောင်း ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်က ပြောသည်။ ယင်းတွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ပြည် ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်က မီဒီယာများကို အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။ ”ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံပုဒ်မ ၃၅၄ မှာ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ လွတ်လပ်စွာရေးသားခွင့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခွင့် စုဝေးဆောင်ရွက်ခွင့်တွေကို အခွင့်အရေးပေးထားပြီးသား ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအခွင့်အရေးတွေကို ဒီဥပဒေကလာပြီး ကန့်သတ်ချုပ် နှောင်သလိုဖြစ်တာက ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ ဒီလိုဆောင်ရွက်တာသည် စံချိန်၊ စံညွှန်းနဲ့မ ကိုက်ညီဘူး။ ပြည်သူလူထုရဲ့ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခွင့်တွေကို ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်တယ်လို့ ကျွန်တော်တို့က ယူဆပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပါတီရော အခြားနိုင်ငံရေးပါတီ တွေကပါ လုံးဝလက်မခံဘူး။ ပြင်း ပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်တယ်လို့ သဘောထားကြေညာထားပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။
ယခုအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် ဆွေးနွေးနေသည့် ငြိမ်းစုစီဥပဒေကိုပြင်ဆင်မည့် ဥပဒေကြမ်း၏ ပုဒ်မ ၁၈ တွင်”မည်သူမဆိုနိုင်ငံ တော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုး ရေး၊ ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ပြည်သူတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရား အကျိုးတို့ကို ပျက်ပြားစေရန်အကြံ ဖြစ်စေ၊ ထိုသို့ပျက်ပြားတန်ရာသော အခြေအနေဖြစ်နိုင်ကြောင်း သိလျက်နှင့် ဖြစ်စေ၊ ငွေ (သို့မဟုတ်) ပစ္စည်းကိုလည်းကောင်း၊အခြားနည်းလမ်း တစ်ခုခုကိုသော်လည်းကောင်းသုံး စွဲ၍သူတစ်ဦးဦးအားငြိမ်းချမ်းစွာစုဝေးခြင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခြင်းပြုအောင် လှုံ့ဆော် ခြင်း၊ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဖျားယောင်း ခြင်း (သို့မဟုတ်) တိုက်တွန်းခြင်း ကိုပြုကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင် ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူကိုသုံးနှစ်ထက် မပိုသော ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ရမည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ် နိုင်သည်”ဆိုသည့် အချက်ပါဝင်လာကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအချက်သည် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ ၃၅၄ တွင် ပေးအပ်ထားသည့် နိုင်ငံသားများ၏ မူလအခွင့်အရေးဖြစ်သော နိုင်ငံသားတိုင်းသည် နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ရပ်ရွာအေး ချမ်းသာယာရေး (သို့မဟုတ်) ပြည်သူတို့၏ ကိုယ်ကျင့်တရားအလို့ ငှာ ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် ဥပဒေများနှင့် မဆန့်ကျင်လျှင် မိမိယုံကြည်ချက် ထင်မြင်ချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ ရေးသားဖြန့်ဝေခွင့်၊ လက်နက်မပါဘဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ရှိသည်ဟူသော ပြဋ္ဌာန်းချက်တို့ကို ဥပဒေကိုင်တွယ် အကောင်အထည်ဖော်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်(သို့မဟုတ်) အဖွဲ့အစည်းတို့က စိတ်ကြိုက်အခြေအနေ ဖန်တီးနိုင်ခွင့်ရ ရှိရန် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်မှုပြုလာသည်ကို တွေ့ရှိနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံ ရေးပါတီ ၂၁ ပါတီ၏ ပူးတွဲသဘောထား ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဆွေး နွေးနေသော ငြိမ်းစုစီဥပဒေကြမ်းသည် ပြည်သူကိုကာကွယ်ရမည့်အစား ပြည်သူကိုဖိနှိပ်သည့်ကိရိယာအဖြစ် အသုံးပြုလာကြောင်း တွေ့မြင်နေရပြီး ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းသူများအနေဖြင့် အနာဂတ်တွင် ပေါ် ပေါက်လာနိုင်မည့် ဆက်စပ်ပြ ဿနာများအား မစဉ်းစားဘဲ ဆောင်ရွက်ပါက ယင်းဥပဒေကို အကောင်အထည်ဖော်ရမည့် ရဲအရာရှိများက အဓိပ္ပာယ်ကောက် ယူမှုကျယ်ပြန့်လျှင် ကျယ်ပြန့်သလိုလူထုကို ထိခိုက်မည်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီပါတီသစ် ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းညွှန့်က ပြောသည်။ ”ဥပမာ-ထောက်ပံ့ရာမှာငွေဆိုတာရှင်းတယ်။ ပစ္စည်းဆိုတာက ကျယ်ပြန့်သွားပြီ။ ရေသန့်ဘူးကအစ ထမင်းထုပ်အထိ ဒီထက်မက အခြားပစ္စည်းပါပါသွားပြီ။ အခြားနည်းလမ်းအားဖြင့်ဆိုတာ ပိုဆိုးသွားပြီ။ စွဲချင်သလိုစွဲလို့ရတဲ့ ပုံစံ ဖြစ်သွားတယ်။အဲဒီအပြင်တရား ရုံးရောက်လာတဲ့အခါမှာ တရားစီရင်ရေးစနစ်က မေးခွန်းထုတ်ခံရတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာ တရားသူကြီး လက်ထဲကို ဒီလိုကျယ်ပြန့်တဲ့ဖွင့် ချင်သလိုဖွင့်လို့ရတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ပါတဲ့ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်မျိုးကို အပ်နှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် ပြည်သူ၊ ပြည်သား တွေရထားတဲ့ လွတ်လပ်စွာဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ခွင့်၊လွတ်လပ်စွာထင် မြင်ချက်ဖော်ပြခွင့်ကို ရုပ်သိမ်းရုံ တင်မကဘူး။ ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာ ဖိနှိပ်တဲ့ကိရိယာလက်နက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ယင်းငြိမ်းစုစီဥပဒေကို ယခင်သမ္မတဟောင်းဦးသိန်းစိန်လက်ထက် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်ကရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပြီး လူ့အခွင့်အရေးစံညွှန်းများနှင့် မကိုက်ညီသည့်အတွက် ဝေဖန်မှုများရှိခဲ့သည်။ ယခု NLD အစိုးရလက်ထက် ၂ဝ၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာတွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပြီး ယင်းဥပဒေကျင့်သုံးနေမှု နှစ်နှစ်မပြည့်ခင်ကာလ၌ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီဝင် ဒေါက်တာမြတ်ဥာဏစိုးက ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်တွင် လွှတ်တော်သို့တင်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိအမျိုးသားလွှတ်တော်တွင် အဆိုပြုထားသည့် ငြိမ်းစုစီဥပဒေမူကြမ်းအရ မူလတည်ဆဲ ဥပဒေထက် ပုဒ်မတစ်ခုထပ်တိုး တင်ပြထားသည့်အပြင် စီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒပြသူများအနေ ဖြင့် ဆန္ဒပြပွဲကုန်ကျစရိတ်နှင့် ကုန်ကျခံသူကိုပါ တင်ပြရမည်ဆိုသည့် အချက်ပါဝင်လာကြောင်း သိရသည်။
ဆောင်းရာသီ အိုလံပစ်ပွဲ တက်ရောက်လာသူ မြောက်ကိုရီးယား ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် ကင်ယွန??
ငြိမ်းချမ်းရေး ဂီတပွဲတော် သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲမှ ဒုတိယဆုရှင် ကြူကြူခိုင်ကို မြန်မာသံစဉ် မြ
လန်ဒန်ဒါဘီမှာ အာဆင်နယ်ကို ယုံကြည်ရမယ့် အလှည့်
တာလီဘန်တို့၏ တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ဒဏ်ရာရသွားကြောင်း အမေရိကန်စစ်တပ် အတည်ပြု?
ပေါင်လေးဘီလီယံနီးပါးဖြင့် မန်ယူကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရရန် ဆော်ဒီမင်းသား ရည်မှန်း၊ ခြေစွမ်ြး?
ဖခင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျမှုကြား ဆက်စပ်မှုရှိ
အမေရိကန် တစ်ဝန်းရှိ ကျောင်းသားများ ကျောင်းပြင်ထွက်ကာ သေနတ်အသုံးပြု အကြမ်းဖက်မှုကို ကန့်ကွက